Iswiidhan oo deeq dhaqaale oo ay ugu talagashay abaaraha ugu deeqday Soomaaliya | Somaliska
Iswiidhan oo deeq dhaqaale oo ay ugu talagashay abaaraha ugu deeqday Soomaaliya
Iyadoo gobolka geeska Afrika gaar ahaan dalalka Soomaaliya iyo Keenya ay abaaro xun iyo roob yari soo wajahday ayaa haddana dowladda Iswiidhan waxaa ay malaayiin doolar ugu deeqday dowladda Soomaaliya si wax loogu qabto da’daaladda ligi doonayo in wax loog qabto abaaraha ganafka ku dhiftay.
Danjiraha Iswiidhan ee dhawaan Soomaaliya loo magacaabay Michael Lindvall, ayaa isagoo la hadlaya BBC-da laanteeda soomaaliga sheegay in sanad walba ay ugu deeqo afartan malyan, deeqdaas oo lugu fuliyo dhinacayadda horumarinta nabad galayadda iyo ciidammadda Amisom ee halkaas u jooga nabad ilaalinta. Danjiraha ayaa sidoo kale in bilihii ugu dambeeyey ee sanadkii hore bixiyeen lacag gaareeysa 24 malyan si wax loogu qabto abaaraha dalka ka jira ee xilligaas qeylo dhaanteedii soo bilaabatay.
Hadalka wasiirka ayaa imanaya iyadoo toddobaadkii hore madaxweynaha dhawaan la doortay ee Soomaaliya mudane Maxamed C/laahi Farmaajo shaaciyey in dalku ku jiro musiibo qaran kuna baaqay in gar gaar lala soo gaaro kumunaanka kun ee soomaaliyeed ee abaaraha ku wax yeeloobeen.
Qeybo ka mid ah dalka ayaa waxaa ka taagan abaaro tii ugu xumeyd oo muddo lixdan sanno ka hor ugu dambeeysay nooceeda. Abaartan ayaa sabab u ah muddo saddex sanno ah oo aan dalku ka di’in roob taasoo wax yeeleeysay dadka iyo duunyadda.
Video: Sidee u dhacay weerarkii Trollhättan